ကုန်ကြမ်း Synephrine HCL အမှုန့် (5985-28-4) hplc≥98% | AASraw အဆီဆုံးရှုံးမှု
/ ထုတ်ကုန်များ / အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့် / Synephrine HCL အမှုန့်
rating: SKU: 5985-28-4. အမျိုးအစား: အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့်
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Synephrine HCL မှုန့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (5985-28-4) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Synephrine HCL အမှုန့် အပင်ကိုတွေ့နှင့်ဖြည့်စွက်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ထုတ်ယူကာသဘာဝဖြစ်ပေါ် alkaloid ဓာတုဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်ပါတယ်။ ခါးသောလိမ္မော်ရောင်လူကြိုက်အများဆုံး synephrine စက်ရုံဖြစ်ပြီး၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တဲ့သမိုင်းရှိပါတယ်။ ခါးသောလိမ္မော်ရောင်အလားအလာအသုံးပြုမှုတစ်ကျယ်ပြန့်အတိုင်းအတာရှိတယ်နေစဉ်, synephrine အဓိကအားအသုံးပြုသောနှင့်အလေးချိန်နှင့်အဆီဆုံးရှုံးမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုများအတွက်လေ့လာခဲ့ပြီ။
Synephrine HCL အမှုန့်ကိုဗီဒီယို
Synephrine Hydrochloride အမှုန့်အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: Synephrine Hydrochloride အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 147-150 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
Synephrine (CAS 5985-28-4) ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Listen, hourglass သငျသညျရှိသည်ဖို့တမ်းတခဲ့တာတွက်ဆကြောင်းလာပြီထံမှသင်တို့တားဆီး junk အစားအစာများအဘို့သင့်တဏှာဖြစ်သနည်း တစ်ဦးဿုံပါးလွှာကိန်းဂဏန်းရဖို့လုပ်ဖို့အရာတစျခုမှာသင့်ရဲ့အစာစားချင်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ သင်လုပ်ပေးပြီးတာနဲ့သင်ကတစ်ဝက်စစ်တိုက်ရာတွင်အနိုင်ရကြပါလိမ့်မယ်။ အစာစားချင်စိတ်ကိုလျှော့ချဖို့ရေးဆွဲပြီးဖြစ်ကြောင်းစျေးကွက်အပေါ်အများကြီးမူးယစ်ဆေးရှိပါတယ်။ Syneprine သူတို့အားမူးယစ်ဆေးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်၌ Synephrine ပြန်လည်သုံးသပ်, သင်ကကိုယ်အလေးချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုမှကြွလာသောအခါအတော်လေးလူကြိုက်များဖြစ်လာသည်ဒီဆေးအကြောင်းကိုအထောက်အကူဖြစ်စေသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
Synephrine အဆီ-မီးလောင်ရာနှင့်အစာစားချင်စိတ်-နှိပ်ကွပ်တဲ့သတ္တိလည်းရှိတယ်တဲ့အစွမ်းထက်လှုံ့ဆော်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစကောင်းတစ်ဦးဇီဝြဖစ်ကိုထောကျပံ့ဖို့သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကူညီပေးသည်။ ဤရွေ့ကားဂုဏ်သတ္တိများအစာစားချင်စိတ်ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့ကြိုးစားအားထုတ်လေ့ရှိ၏အဝလွန်နှင့်အဝလွန်လူတို့အဘို့ Synephrine မြင့်မားအကျိုးရှိသောပါစေ။ ဒါဟာသာမန်လို့ခေါ်တဲ့အမှုန့် '' ဆား '' ၏ပုံစံကိုရောင်းမယ့် Synephrine HCL.
Synephrine အများစုအမျိုးမျိုးသော Citrus မျိုးစိတ်များတွင်တွေ့ရှိရပါသည်။ ဒါကြောင့်နှစ်ဦးစလုံးချိုမြိန်ခြင်းနှင့်ခါးသီးလိမ္မော်သီးအမျိုးပေါင်းအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ရဲ့အရှိသျောလညျးကခါးသောအမျိုးပေါင်းတွင်ပိုမိုပေါများပါတယ်။ 50 လက်ကိုညှစ်ခြင်းနှင့်စီးပွားရေးအရ-ပြင်ဆင်ထား Citrus အသီးဖျော်ရည်ထက်ပိုမိုပါဝငျသောတဦးတည်းစစ်တမ်းများတွင် synephrine (CAS 5985-28-4) အဆင့်ဆင့် 4-60 / L ကို MG ကနေအထိတွေ့ရှိခဲ့သည်။
Synephrine ၏ဓာတု Properties ကို
မူးယစ်ဆေးဝါး ဓာတု NAMES ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ
CAS အရေအတွက် 94-07-5
InChl Key ကို YRCWQPVGYLYSOX-UHFFFAOYSA-N ကို
အံ Mass 167.21 g / mol
အရည်ပျော်မှတ် 162 မှ 164 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (324 မှ ​​327 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်)
P-synephrine လူ့အလောင်းတွေအတွက်သဘာဝကျကျဖြစ်ပေါ်, ထိုသို့ပုံမှန် Monoamine oxidase အင်ဇိုင်းတွေအဖြစ်လူသိများသည်ဦးနှောက်အတွင်းရှိအင်ဇိုင်းတွေအားဖြင့် metabolized လုပ်ပြီးချေဖျက်သည်။ ဤရွေ့ကားအင်ဇိုင်းတွေ dopamine, serotonin, နှင့် norepinephrine ၏အဆင့်ဆင့်ထိန်းချုပ်သောအလွန်တူညီသူများဖြစ်ကြ၏။
Synephrine လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ adrenal system ကို impact နှင့်သင့်နေ့စဉ်ကယ်လိုရီအသုံးစရိတ်၏အထိ 70 ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သောဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းမြှင့်တင်ရန်ယုံကြည်ကြသည်။ လေ့လာမှုများအရ, ဒီပါဝင်ပစ္စည်းအကျိုးဆက်အဆီဆုံးရှုံးမှုနှင့်အလေးချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုမှအဓိကဦးဆောင်, သင့်ဇီဝြဖစ်အရှိန်မြှင့်ရန်ကူညီပေးသည်။
Synephrine over-the-counter ဦးတည့်မှု / အအေးဆေးဝါးများ, စွမ်းအင်ဖြည့်စွက်ခြင်း, ကိုယ်အလေးချိန်ဖြည့်စွက်၏ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံမှာတွေ့ရှိဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်သော, အ Pseudoephedrine နှင့် ephedrine မှဓာတုဗေဒနှင့်ဆင်တူသည်။ synephrine ပတ်သက်. ကောင်းသောအရာကထိထိရောက်ရောက်သင့်ရဲ့သွေးပေါင်ချိန်နှင့်နှလုံးခုန်နှုန်းအပေါ်တစ်စုံတစ်ရာသက်ရောက်မှုဖေါ်ပြခြင်းမရှိဘဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝြဖစ်နှုန်းကိုတိုးပွါးသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒီကြောင့်, ကယျြပွနျ့စှာ ephedrine ဖို့အကောင်းဆုံးအစားထိုးဖြစ်စဉ်းစားသည်။
Synephrine ရှည်လျားသောသမိုင်းရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဘို့အရှေ့အာဖရိကနှင့်အပူပိုင်းအာရှတစ်လျှောက်လုံးဆေးဖက်ဝင်အပင်တစ်ပင်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတာရှည်ရင်, ဝမ်းချုပ်, ပျို့ခြင်း, ရင်ပူများအတွက်ကုသမှုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့ Synephrine ယင်း၏လှုံ့ဆော်သက်ရောက်မှုများအတွက်အများအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာဦးနှောက်ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ entwines နှင့်အထူးသဖြင့်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်အဘို့, အစာစားချင်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်အတွက်ကူညီပေးသည်သောဇီဝြဖစ်မှုကိုလှုံ့ဆော်။ သငျသညျ synephrine ဆံ့ကြောင်းကိုယ်အလေးချိန်ဖြည့်စွက်ယူပြီးတာနဲ့ကိုသင်ကျန်းမာအလေးချိန်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စီမံခန့်ခွဲ, အရှင်, satiated ခံစားရနှင့်လျော့နည်းစားလိမ့်မည်။
synephrine ကိုယ်အလေးချိန်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ရသောနောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ thermogenesis လှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်မလိုချင်တဲ့အဆီချမီးရှို့ဖို့သင့်ခန္ဓာကိုယ်တက်တွင်စတင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ပိုလျှံအဆီပံ့ပိုးမီးလောင်ရာထို့အပြင်ဖြည့်စွက်ကိုလည်းကိုယ်ခန္ဓာ၏ထပ်မံသိမ်းဆည်းသောကာကွယ်ပေးသည်။ ပုံမှန်ပေါ်မှာဤသဘာဝအပါဝင်ပစ္စည်းဆံ့ကြောင်းဖြည့်စွက်စားသုံးခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်မြန်အဆီဆုံးရှုံးနိုင်ပါလိမ့်မည်။
လေ့လာရေးအဝလွန်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါများအကြား link တစ်ခုထူထောင်ခဲ့ကြသည်။ အဝလွန်နှင့်အဝလွန်လူတွေကကိုယ်အလေးချိန်ကူညီပေးနေအပြင်, synephrine တစ်ဦးခံစားချက် Enhancer ဖြစ်တွေ့ရှိထားသည်။ ဤသည်ကစိတ်ဖိစီးမှု, စိတ်ကျရောဂါ, သို့မဟုတ်အခြားအလေးချိန်-related ပြဿနာနှင့်အတူသူတို့အားတစ်ဦးအကျိုးရှိသောဖြည့်စွက်စေသည်။
Synephrine (CAS 5985-28-4) သောက်သုံးသော
လူအများစုအဘို့, တစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ်ယူ 10-20 မီလီဂရမ်တစ်သောက်သုံးသောအကြံပြုသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ 50 မီလီဂရမ် (မသုံးကြိမ်မြောက်အောင်တစ်ရက်သော်လည်း) ၏သောက်သုံးသောအချို့သောလူများအတွက်အကြံပြုနိုင်ပါသည်။
လေ့လာမှုတစ်ခုအနေဖြင့် synephrine ၏မီလီဂရမ် ၅၀ ကိုတစ်ကြိမ်တည်းသောက်ခြင်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုနှုန်းကို ၆၅ ကယ်လိုရီတိုးပွားစေသည်။ synephrine မသုံးမီသင့်အတွက်အသုံးဝင်သောဆေးသောက်ရန်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်သင့်သည်။
သငျသညျ synephrine စတင်သုံးစွဲသည့်အခါရုံအများအပြားဖြည့်စွက်နှင့်ဝသကဲ့သို့, သင်အများကြီးသတိထားမိမရပါလိမ့်မယ်။ အကောင်းဆုံးရလဒ်တွေကိုသာဆက်လက်သုံးစွဲခြင်းပြီးနောက်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ လူအများစုဟာယေဘုယျအားစသည်တို့ကိုထိုကဲ့သို့သောလျင်မြန်စွာနှလုံးခုန်အဖြစ်စိတ်ကြွဆေး, ပျို့, Jitter, နှင့်ဆက်စပ်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမဆိုမပါဘဲစွမ်းအင်အတွက်အနည်းငယ်တိုးလာသတင်းပို့
ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ Synephrine ရိုက်လိုက်တဲ့အခါ
နေ့စဉ်ထောက်ခံအုကူံပထိုးထက်ပိုယူမနေပါနဲ့: အမြန်ရလဒ်များကိုရရှိမယ့်အလျင်ခုနှစ်တွင်, သင်အကြံပြုထိုးခြင်းထက်ပိုပြီး synephrine လောင်ဖို့စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံစေခြင်းငှါ။ သတ်မှတ်ထားသည့်ထက် ပို. synephrine အသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့သောခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်မူးဝြေခင်းအဖြစ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏အန္တရာယ်တိုးပွားစေပါသည်။
သည်အခြားစိတ်ကြွဆေးနှင့်အတူ synephrine ပေါင်းစပ်မနေပါနဲ့: Synephrine ဟာအလွန်အစွမ်းထက်လှုံ့ဆော်ဖြစ်တယ်, ဒါသည်အခြားစိတ်ကြွဆေးနှင့်အတူကပေါင်းစပ်ပြီးအချို့သောအလေးအနက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော PEA သို့မဟုတ် ephedrine ကဲ့သို့သောအခြားအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူပြုလုပ်အသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့သောနေခြင်းဖြင့်သတိလစ်, cardiac arrest နဲ့, နှင့်မြင့်မားသောသွေးဖိအားအဖြစ်ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျတခုနောက်ခံဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခွအေနေရှိပါက synephrine ယူမနေပါနဲ့: သင်သွေးတိုး, HIV / AIDS သို့မဟုတ်အခြားလေးနက်သောရောဂါခံစားနေရပြီးနေလျှင်၎င်းသည် synephrine တာကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဖြည့်စွက်အပြန်အလှန်နှင့် / သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့အခွအေနေကိုထိန်းချုပ် / ဆကျဆံဖို့တာခံရနိုငျသောဆေးဝါးများနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖြစ်နိုင်သည်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကြောင့် synephrine (5985-28-4) နှင့်အခြားဒြပ်ပေါင်းများကိုပေါင်းစပ်ရာမှရရှိလာတဲ့အလားအလာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှ, ကရရှိနိုင်ပါ Synephrine ၏စင်ပုံစံကိုဝယ်ခြင်းငှါအကောင်းဆုံးပါပဲ။ Filler အသုံးပြုကုန်သည်တွေရှောင်ကြဉ်ပါသို့မဟုတ် ephedrine သို့မဟုတ်ကဖိန်းဓာတ်နှင့်တူထပ်နှင့်အတူ synephrine ရောမွှေပါ။
သင်က Synephrine အပေါ် Overdose လျှင်အဘယ်အရာကိုလုပ်ပါရန်
သငျသညျ synephrine အပေါ် overdose ကိစ္စတွင်သင်အကြံပြုနေ့စဉ်ဆေးထိုးခြင်းထက်ပိုပြီး synephrine ယူကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျထိုကဲ့သို့သောအစာရှောင်ခြင်းနှလုံးခုန်နှုန်း, လေဖြတ်ခြင်း, ခေါင်းကိုက်ခြင်း, မူးဝြေခင်း, etc အဖြစ်အချို့သော synephrine ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုခံစားရစေခြင်းငှါ, ဒါကြောင့်တစ်ချိန်ကမှာအရေးပေါ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာရုံကိုရှာအရေးကြီးပါတယ် ။ တနည်းအားဖြင့်, သင် 1-800-222-1222 မှာအဆိပ်အကူအညီလိုင်းမခေါ်နိုင်ပါ။
Synephrine HCL အမှုန့်နိဂုံး
ဇီဝြဖစ်တိုးပွါးကြောင်းဆိုပျော့လှုံ့ဆော်ထံမှမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း synephrine ဖြည့်စွက်၏သော့အကျိုးကျေးဇူးပိုမိုမြန်ဆန်ကိုယ်အလေးချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်လျော်သောအစားအစာနှင့်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့ပေါင်းလိုက်သောအခါ synephrine သင်တစ်ဦးပြီးပြည့်စုံသောကိုယ်ခန္ဓာကိုရကူညီခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုမြင့်မားတဲ့သွေးဖိအား, နှလုံးပြဿနာများ, အဖြစ်အလေးချိန်-related ပြဿနာများကိုရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်